कोरोना जाँच्न अझैं डर! – Health Post Nepal
कोरोना जाँच्न अझैं डर!
२०७८ साउन २ गते १२:०६
केही महिनाअघि सरकारले ‘टोल-टोल’मा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने अभियान चलायो। धेरैभन्दा धेरैजनाको परीक्षण गरेर संक्रमणको चक्र तोड्ने र सचेत गराउने सरकारले लक्ष्य थियो।
त्यसैका लागि हरेक स्थानीय तहहरूमा एन्टिजेन किट पनि पठाइयो। देशभरिका स्थानीय तहले एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न सुरु पनि गरे। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि परीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइयो।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पनि पाँच दिनमा ५० हजार मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, एक दिनमा १० हजारको परीक्षण गर्ने लक्ष्य थियो। तर कोरोना नियन्त्रणमा महानगरले स्थानीयहरुकै समर्थन पाएन। पाँच दिनमा ५० हजारको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको काठमाडौं महानगरले झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा २० हजार जनाको पनि परीक्षण गर्न सकेको छैन।
यसको कारण मानिसहरु आफै परीक्षणका लागि अग्रसर नभएको बताउँछन्, महानगरका कोरोना परीक्षण संयोजक ऋषि भुसाल।
‘हामीले हरेक टोलवासीहरूका लागि एन्टिजेन परीक्षण गर्न खोजेका थियौं। वडा कार्यालयहरुले समय मिलाएर परीक्षण गर्ने तालिका पनि मिलाएका थियौं, तर मानिस आफैं परीक्षण गर्छु भनेर अग्रसर भएनन्,’ उनले भने।
स्थानीयहरु अहिले पनि कोरोना परीक्षण देखि डराउने र परीक्षण गर्न नरुचाएको भुसाल बताउँछन्। केही समय अगाडि परीक्षण गर्न जाँदा मानिसहरू भाग्थे।
भुसालका अनुसार मानिसहरूले एन्टिजेनमा विश्वास नगरेको र यस विधिलाई र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटि) परीक्षणसँग तुलना गर्ने गरेका छन्।
‘हामीले मानिसहरुलाई बुझाउनै सकेनौं। आरडिटि र एन्टिजेन एउटै होइन भनेर सम्झाउँदा पनि मानिसहरुले नबुझेको र समाजबाट बहिस्कार हुने डर वा रोग थाहा पाए गाह्रो हुने डरले परीक्षण गर्न मान्दैनन्।’
परीक्षण गराउन सबै भन्दा बढी समस्या श्रमिक तथा सुकुम्बासीहरुलाई छ। परीक्षणमा यी वर्गहरुमा धेरै हिचकिचाहट रहेको पाइएको छ। उनीहरुलाई कोरोना संक्रमण भए कहाँ बस्ने र कसले कमाएर खुवाउने भन्ने बारेमै चिन्ता रहेको उनले बताए।
महानगरपालिकाले हाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका व्यक्तिहरुमा निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने आफैं सजग भएर परीक्षण गर्न आउनेहरुलाई एन्टिजेन परीक्षण गराउँदै आएको छ।
असारको पहिलो सातादेखि निषेधाज्ञा खुकुलो गरे पनि कोरोना संक्रमण भने घटेको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जान थालेका छन्।
गत एक हप्ताको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमित बढ्दै गएको देखिन्छ।
काठमाडौंमा असार २८ गते २८९ जना संक्रमित भएका थिए भने असार २९ गते ४१० जना, असार ३० मा २९४ जना, ३१ गते ३३९ जना र श्रावण १ मा ३४३ जना संक्रमित पुष्टि भएको छ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा असार २८ मा ५४ जना, २९ गते ८० जना , ३० गते ६९ जना, ३१ गते ८० जना र श्रावण १ मा ६२ जना संक्रमित भएका छन्।
ललितपुरको तथ्याङक अनुसार असार २८ मा ९० जना, २९ गते ९७ जना, ३० गते ६२ जना, ३१ गते १३४ जना र साउन १ गते १३६ जना संक्रमित भएका छन्।
तर परीक्षण भने निकै कम हुन थालेको छ। जति कम परीक्षण गर्दा पनि संक्रमित दर भने घट्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायको श्रावण १ गतेको तथ्याङक अनुसार संक्रमणको दर अझै १.५ प्रतिशत रहेको छ। परीक्षणमा मानिस आउन नचाहनु काठमाडौंको मात्र समस्या नभई भक्तपुर र ललितपुरको पनि रहेको छ।
ललितपुर नगरपालिकाका परीक्षण संयोजक देवी गुरुङका अनुसार ललितपुर नगरमा पनि मानिस कुनै रुची राख्दैनन्।
हालसम्म ४७७१ जनामा मात्र एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ जसमा २२४ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्।
‘कोरोना पोजिटिभ हुने दर बढ्दै गएको छ, तर मानिसहरुको कुनै इच्छा नै देखाइरहेका छैनन्। हामीले कारखानाहरुमा पनि आफैं गएर परीक्षण गरिरहेका छौं। कतिपय मानिसहरु कारखाना नै बन्द गरेर जाने गरेका थिए। तर पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरेर ८०० जनामा परीक्षण गराएका छौं’, उनले भनिन्।
भक्तपुर नगरपालिकाका पनि मानिसहरुलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन थप केही विचार गर्दै आएको नगरपालिकाका इन्चार्ज रत्न सुन्दर लासिवाले बताए।
‘हामीले ख्वप अस्पतालमा अवस्थित ख्वप पोलिक्लिनिक च्यामासिंहमा परीक्षण केन्द्र बनाएका छौं। तर मानिसहरु परीक्षणका लागि आएनन्। संक्रमण बढ्दै गए अब घरघरमै जाने विचार गर्दैछौं,’ उनले भने।
उनले कोरोना संक्रमण भए पनि मानिसहरु आफैं औषधी किनेर खाने बानी र परीक्षण गर्न डराउने बानीका करण संक्रमित लुकेको हुन सक्ने बताए। नगरपालिकाले जेठ २४ बाट सुरु गरेको परीक्षणमा हालसम्म ३००० ले परीक्षण गराएका छन् जसमध्य १६४ संक्रमित पुष्टि भएका छन्।